Yakha iphepha lakho lokuQala eliQhelekileyo kunye neeGoogle Apps | Martech Zone
Yakha iphepha lakho lokuQala eliQhelekileyo ngeeNkqubo zikaGoogle
NgoLwesithathu, Agasti 22, 2007 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Ngokuhlwanje ndithathe isigqibo sokuthabatha ikhefu kodwa ndisafuna ukongeza ipizazz kunye neyam umsebenzi omtsha. Liqela elincinci endisebenza nalo kodwa intle kakhulu indlela evuleke ngayo kwitekhnoloji. Ukusuka kwilulwane, ndahambisa amaxwebhu ethu ekwabelwana ngawo ndaya kuGoogle amaXwebhu. Yayilinyathelo elikhulu ukusukela oko sinezinto ezimbalwa zonxweme. Ngoku sonke sinalo uxwebhu olufanayo nohlaziyo lwamva nje-ngakumbi ngakumbi.
Umhlobo wam uBill wandibuza ukuba kutheni ndingaqhekezanga Izinhlelo zeGoogle. Uye wakhankanya omnye umhlobo, uDale, wayisebenzisa ukuseta ishishini lomfazi wakhe kwaye bayayithanda. Ke ngokuhlwanje ndiye ndadlala ngayo. Yinto encinci, kodwa inokusebenza… ndiza kuqhubeka nokuyivavanya ukuze ndibone.
Ndakhe into enye epholileyo ngokuhlwanje, nangona kunjalo. Iiapps zikaGoogle zikuvumela ukuba wakhe iphepha lokuQala elilelakho kwaye ikwabonelele nge DNS useto kwimeko apho ufuna ukuyakha kanye kwindawo yakho! Umzekelo, unokwenza iphepha http://start.yoursite.com! Ngokuhlwanje ndakhe iPatronpath Start Page:
Imibala yethu yelogo kunye nebrand zihombisa iphepha.
Umxholo ovaliweyo kwikholamu yasekhohlo ebandakanya iKhalenda eqhelekileyo, imozulu yendawo, kwaye ke, uMbutho weSizwe werestyu!
Iikholamu ezi-2 ezilungileyo zingenziwa ngokwezifiso nokuba umntu uthanda ntoni, njengaye iGoogle.
Unyaweni unonxibelelwano oluqhelekileyo kuyo kwiiwebhusayithi zethu ezimbalwa.
Ayisiyonto inkulu okanye iyabhabha, kodwa kwimizuzu embalwa yokudlala ngesixhobo sasimahla, ilungile!
Ngaba Unyango lweMidiya yoLuntu lunokunyanga uxinzelelo?
Agasti 27, 2007 ngo-9: 41 PM
Ipholile. Ndiseta le nto isithuba seenyanga ezimbalwa umva 🙂
Sep 10, 2007 kwi-10: 03 AM
Ndingacebisa iiflakes zamaphepha okanye i-netvibes kuye nakubani na. Ndisebenzisa iiflubheki ukulawula iidilesi ezininzi ze-imeyile kwaye ndibhalise malunga neebhloko ze-30. Kwenza kube lula ngokulula!